Sina 75% famonoana alikaola amin'ny orinasa mpanamboatra IBC / Drum | Zhongrong
Eo ambany fitarihan'ny covid-19, 75% ny famonoana alikaola zava-mahadomelina dia lasa filaminantsika manokana amin'ny fiainantsika andavanandro indrindra amin'ny toerana sasany ampahibemaso toy ny sekoly, hopitaly, fivarotana lehibe, hotely, sns. Ity vokatra ity dia misy alikaola 75% mety hahafaty ny coronavirus sy ny hafa mikraoba hiambina tsara kokoa ny fahasalamantsika.
Teknolojia etanôla mitarika any Chine mandritra ny 20 taona mahery
Eo ambany fitarihan'ny covid-19, 75% ny famonoana alikaola zava-mahadomelina dia lasa filaminantsika manokana amin'ny fiainantsika andavanandro indrindra amin'ny toerana sasany ampahibemaso toy ny sekoly, hopitaly, fivarotana lehibe, hotely, sns. Ity vokatra ity dia misy alikaola 75% mety hahafaty ny coronavirus sy ny hafa mikraoba hiambina tsara kokoa ny fahasalamantsika. Ny fonosana amponga / IBC dia toekarena be, miaraka amin'ny habetsany ary ny vidiny ambany kokoa noho ny fonosana kely hafa, azonao atao ny mameno azy ireo ao anaty fonosana kely ary mampiasa azy ireo. Rehefa mamokatra toaka ara-nofo isika, ny vidinay dia hifaninana ary kalitao avo lenta. Ankoatr'izay, nandalo ny fanamarinana CE, FDA ary ISO izahay. Nanomboka marika izahayTECH-BIO hanaovana azy ho marika No. 1 ho an'ny vokatra famonoana otrikaretina any Shina satria manana alikaola tsara indrindra any Shina izahay. Mpitarika any Shina izahay amin'ny teknolojia etanol. Manana faritra atrikasa 500000 metatra toradroa eo amin'ny faritanin'i Hebei, Sina izahay. Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 1999. Na izany aza, azonay atao ihany koa ny mandray OEM & ODM ho an'ny karazan-drongon'ny otrikaretina toaka. Manantena ny ho lasa mpiara-miasa manerantany ary hahatanteraka ny toe-javatra mandresy!
Akora ilaina: Ethyl Alikaola 75% (V / V)
Volume volume: 200L / 1000L
tombony: Miorina amin'ny alikaola · azo antoka eo amin'ny tontolo iainana · Maimaimpoana Triclosan ·
Use: Mba hanampiana amin'ny famongorana bakteria amin'ny hoditra na eo ambonin'ny zavatra.
Direction: Apetaho tsotra fotsiny amin'ny tanana, ny hoditra tsy miova na ny etỳ ambonin'ireo zavatra ankapobeny, ary tazomy selama 1-3 minitra.
Warnings: Ho an'ny fampiasana ivelany irery ihany · mora mirehitra · Aza manalavitra ny hafanana sy ny lelafo mba tsy ho azon'ny ankizy ∙ Aza mifandray amin'ny tarehy, maso ary hoditra vaky.
Akora tsy miasa: Rano voadio
Fampahalalana hafa: Tehirizina amin'ny toerana mangatsiaka sy maina misy tombo-kase.
Lany daty amin'ny: 2 taona
Ny TECH-BIO™ Difference
Nosedraina ny laboratoara: 99,99% Mandaitra amin'ny mikraoba mahazatra indrindra
Inona "iraisana" manadio ve ny zavatra? Hamono corona ve izy io?
Misaotra anao amin'ny fanontaniana lehibe! Hainay tanteraka ny antony anontanianao an'io fanontaniana io. Zava-dehibe ny manamarika fa ny FDA amin'izao fotoana izao dia tsy nanaiky zava-mahadomelina, anisan'izany ireo mpanadio tanana, mba hisorohana na hitsaboana kovid-19. Andraikitray ny miantoka ny fandehanan'ny mpanjifa amin'ny loharanom-baovao marim-pototra amin'ity karazana fampahalalana ity, ny manam-pahaizana sinoa sasany dia efa nanaporofo fa ny 75% ny alikaola dia afaka miditra ao amin'ny fonon'ny covid-19 ary manamafy ny proteinina hampiatoany azy.
Salama, ahoana no fomba fiasa miasa amin'ny paompy? Vao nividy tavoahangy izahay fa heverinay fa mety tsy mandeha ny paompy. Misy fomba manokana hampiasana azy io hiasa?
Misaotra anao nahatratra ny momba ny famonoana alikaola TECH-BIO 75%! Miezaha manery ny paompy amin'ny rantsan-tànanao, tokony hipoitra avy eo ny paompy.
Ary ny fonosana?
Azontsika atao ny manamboatra amponga 200L na 1000L IBC ho fonosana betsaka ho an'ny Alika 75%, mety ho an'ny disbutributors sasany ny manao famoahana ho fonosana kely.
Novokarin'i Zhongrong Technology Corporation Ltd.
Ampio: No. 1 Road Changqian, Distrikan'i Fengrun, Tanànan'i Tangshan, Faritanin'i Hebei, Sina
Manaraka: 50ml 75% famonoana alikaola TECH-BIO